UMarco Tulio Cicero noRobert Graves. Ukusuka eRoma naseRoma egazini. | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Uvavanyo, Ababhali, Inoveli
UMarco Tulio Cicero wayehlala eRoma, URobert Graves wasenza sahlala kuyo eRoma. Aba babini babelana ngeSixeko saNgunaphakade njengenkuthazo kunye nabo basweleka kwangolo suku, ngoDisemba 7. Eyokuqala, kwaye ngendlela embi kakhulu, kwifayile ye- 43 BC C., okwesibini ku 1985. Bobabini, abafundisi bamagama nabokubhala neminyaka engamawaka amabini phakathi. Namhlanje, kwinkumbulo yakhe kanaphakade, ndabelana nabanye bakhe amabinzana kunye neziqwengana Kwimisebenzi yakhe.
1 UMarco Tulio Cicero
1.1 Iziqwengana kunye namabinzana
2 URobert Graves
2.1 Mna, Claudio
2.2 Uthixokazi omhlophe
2.3 UClaudius uthixo kunye nenkosikazi yakhe uMessalina
UMarco Tulio Cicero
Kuncinci ukuthetha ngomntu owaziwa njengalo mthethoUmpolitiki wase-Roma, isithandi sobulumko, umbhali kunye nesithethi. Iyaqwalaselwa oyena rhetorician ubalaseleyo kunye nesitayile seprose kwisiLatin weRiphabhlikhi yaseRoma, wayehlala kwelinye lamaxesha amnandi kakhulu mandulo naxa amandla ayesasazwa kumagama ehlabathi anje UKesare okanye uPompey. Abo bethu ekwakufuneka bayiguqulele ngeentsuku zethu zaseyunivesithi nabo bayayikhumbula Iikhathalogu, umzekelo.
Ubomi bakhe kunye nomsebenzi wakhe waphawulwa kukungazithembi kunye nokubonakala kwakhe, ukuzikhusela kwiriphabliki kunye nomlo wakhe nxamnye nozwilakhe kaKesare. Lo mlinganiswa ukwamenze wahluka kwizikhundla zakhe kuxhomekeke kwimeko yezopolitiko kwaye kwamkhokelela kwisiphelo esibuhlungu awayenaso. Imifanekiso eqingqiweyo yembali yakhe, njengaleyo yexesha lakhe, inokubonwa kuyo eRoma, uthotho oluhle lwe-HBO kwiminyaka embalwa edlulileyo.
Iziqwengana kunye namabinzana
Kude kube nini, Catilina, uya kuwusebenzisa kakubi umonde wethu? Kuya kude kube nini siseyinto yokudlala yomsindo wakho? Ziza kuyeka phi iingxwabangxwaba zesibindi sakho esingalawulekiyo? Intoni! Ngaba ubukrelekrele bakho abuthintelanga umlindi obukele ubusuku bonke kwiPalatine Hill, nakwabo bakhusela isixeko, nangokoyikeka kwabantu, nakwimvumelwano yabo bonke abemi abalungileyo, okanye itempile enqatyisiweyo emi kuyo iNdlu yeeNgwevu? namhlanje, nobuso obugqithisileyo nobucaphukisayo bamasenethi? Awuqondanga, ngaba awuboni ukuba iyelenqe lifunyenwe? Ngaba awuboni ukuba iyelenqe lakho aliyomfihlo kuye nabani na kwaye wonke umntu sele elibona libotshelelwe?
«Ngenxa yemeko endikuyo, ndikwazile ukonwabela ukonwaba kwaye ndafumana izibonelelo ezingaphezulu kuzo kunabanye, ngenxa yezifundo ezahlukeneyo ebezindonwabisa ukusukela ebuntwaneni (…) Kodwa ngayo yonke into, khange ndithandabuze umzuzwana ndiziveze kwezona nkqwithela zinzima, kwaye ndingathi nakumbane, ndisindise abemi bam kwaye ndiqinisekise wonke umntu, ngaphandle kokubeka ingozi, ubomi obunoxolo.
Isithethi esiphakathi, endisibiza ngokuba silinganiselwe kwaye sinobungcathu, ngokuxhobisa kuphela imikhosi yakhe ngokwaneleyo, ngekhe yoyike ingozi engacacanga kunye nokungaqiniseki ngobuciko; Nokuba awuphumelelanga kakhulu, njengoko kuhlala kunjalo, awuyi kuba sengozini enkulu, nangona kunjalo; kuba ayinakuwa isuka phezulu. Kodwa esi sithethi sethu, esinikela kuye ubukhulu, obuzimisele, obungenangqondo, obukhutheleyo, ukuba wazalelwa oku yedwa, okanye kule nto asebenzise kuphela, okanye kule nto kuphela ayisebenzisileyo, ngaphandle kokuthambisa ubuninzi bakhe ezinye iindlela ezimbini, zifanelwe yindelelo enkulu. Isithethi esilula, kuba sithetha ngokuchanekileyo nangobudala, sele inengqiqo, isithethi esiqhelekileyo, siyathandeka; kodwa le enye intle kakhulu, ukuba ayiyonto ingaphaya koko, ihlala ibonakala ingenangqondo. "
"Kwiiyure zobungozi kuxa ilizwe liyazi icarat yabantwana balo."
"Ubuhlobo buqala apho buphelela khona okanye xa inzala iphela."
"Andazi ukuba ngaphandle kobulumko, oothixo banike umntu into engcono kunobuhlobo."
Lo mBritane uzalwe ngo IWimbledon, imbongi yeMfazwe yokuQala yeHlabathi yaguqulwa yenziwa umbhali wenoveli, kwityala lakhe isihloko esamphakamisela eluzukweni: Mna, Claudio. Akunakwenzeka ukuba ulibale ulungelelwaniso lwakho kwenye ye uninzi lwamanqaku akhunjulwayo ovela kumabonwakude. Kodwa yayiyimisebenzi emininzi eyimbali ayibhalileyo phantsi kwezulu Mallorca ngubani owambonayo esweleka eneminyaka engama-90.
Ubomi bakhe babuphawulwe kwakhona Ihlazo lomntu ezazifihliwe ixesha elide. Kodwa walishiya ilifa lakhe Imibongo yemfazwe kunye nezihloko zembali ezinje Uthixokazi omhlophe, Ukutya kwekhulu, IBelisarius, Imfazwe yeTrojan, Kumkani jesu o Uboya begolide.
Kwaye mhlawumbi ndasinda kuba izifo zazingavumelani ukuba zeziphi kuzo ezinokuba nembeko yokundigqiba. Okokuqala, ndazalwa ngaphambi kwexesha, ndikhulelwe iinyanga ezisixhenxe, emva koko ubisi lukamongikazi aluzange luhlale kamnandi kum, ngoko ke kwavela irhashalala kulusu lwam, emva koko ndanesifo seengcongconi, nemasisi, ezandishiya sisithulu.
«Namhlanje yimpucuko apho kuhlaziswa iimpawu eziphambili zesihobe. Apho inyoka, ingonyama kunye nokhozi zihambelana nentente yesekisi, inkomo, isalmon kunye nehagu yasendle kumzi-mveliso wokunkonkxa; ihashe kunye negreyhound kwindawo yokubheja kunye ne-Ashera engcwele kumatshini wokusarha. Apho iNyanga idelelwa njengesathelayithi engasekhoyo emhlabeni kwaye owasetyhini uthathwa “njengabancedisi bakaRhulumente”. Apho imali inokuthenga khona phantse yonke into ngaphandle kwenyani kwaye phantse wonke umntu ngaphandle kwembongi enenyaniso.
UClaudius uthixo kunye nenkosikazi yakhe uMessalina
"Akukho nto eyenza indoda ibe nenzondo kwaye ingathandeki emehlweni omfazi njengomona."
Uninzi lwamadoda alunasimilo nolukrwada, lungalunganga okanye lubi. Ziyinto encinci yento kunye nenye encinci, kwaye, ixesha elide, akukho nto: ukungahambi kakuhle.
Ungaze ukhumbuze abantu ngeenkonzo osele ubenzele zona kwixa elidlulileyo. Ukuba ngamadoda anombulelo kwaye ahloniphekileyo, ngekhe afune ukukhunjuzwa, kwaye ukuba awanambulelo kwaye awanyanisekanga, isikhumbuzi asizukunceda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » UMarco Tulio Cicero noRobert Graves. Ukusuka eRoma naseRoma egazini.
I-engile yeBruma, inoveli ephumeleleyo kwiTorrente Ballester Prize 2017.